यस्तो बोल्दा परेछन् फर्सादमा, भिम गुरुङ मैले पालेको केटा हो ?
HomeAparadh Khabarयस्तो बोल्दा परेछन् फर्सादमा, भिम गुरुङ मैले पालेको केटा हो ?
काठमाडौँ, । ‘तैँले चिन्या छस्, माँ ......म के गर्न सक्छु तँलाई तेरो छोरी तँ माँ .......५० वर्षको केटा गएर एउटा २५ वर्षको केटीलाई चार्ज गर्न सक्छस् भने म २२ वर्षको केटाले १५ वर्षको केटीलाई गर्न सक्दिनँ होला, तेरै अगाडि ठोकुम तेल्लाई’
प्रेमिकालाई खुशी पार्न कसैकी नावालक छोरीलाई बलात्कार गर्छु भन्ने एउटा गिद्धेनजरवाला ठिटोको बचन हो यो, जुन बचनबापत सात दिनसम्म हनुमानढोका प्रहरीको हिरासतमा बसेर अस्ति मात्र १५ र २५ हजारको धरौटीमा छुटेको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने भिजे, साहना बज्राचार्य “मिस नेपालकी पूर्वप्रतिस्पर्धी” र सुरज गिरी जावलाखेलस्थित विचित्रा एड्भरटाइजिङका सञ्चालक हर्षबर्धन साहनीलाई उनीहरूले टेलिफोनमा धम्क्याएको, एसएमएसमार्फत हतोत्साहित पारेकोजस्ता अभियोगमा पक्राउ परेका थिए, एक साताअघि ।
धेरै पुरानो होइन, चितवनको डान्सिङ कार प्रकरण । प्रहरीले कारभित्र यौनसम्बन्ध राखिरहँदा एकजोडीलाई पक्राउ ग¥यो । उनीहरूले आफू पत्रकार भएको भन्दै कान्तिपुर टेलिभिजनले जारी गरेको परिचयपत्र देखाए । र, प्रहरीले जे–जे भएको थियो, त्यसको ठीक उल्टो पारेर केस मिलाइदियो । उनीहरू छुटे । चितवनमा तमासा देखाउने यो त्यही जोडी हो, जसले त्यसपछि पनि मानिसलाई धम्क्याउने, तर्साउने र फोहोर शब्द बोलेर गाली गर्न बाँकी राखेन । उनीहरूले सँगै बसेर हर्षबद्र्धनलाई धम्क्याएको १२ मिनेटको अडियो रेकर्ड जनआस्थालाई प्राप्त भएको छ । सभ्य समाजमा हुर्किएको कुनै पनि मानिसले त्यो अडियो सुनेपछि साहना र सुरजलाई थुक्छन् र गाला रन्किने गरी झापड हान्छन् ।
सुरजले भनेका छन्, ‘मेरो घरमा सात वटा कार छ । तँसँग के छ रु त्यही जवान छोरी हैन रु’
योभन्दा पनि बढ्ता बोलेका छन्, ‘तेरो पूरा शाखा सन्तानको सम्पत्ति बेच्यो भने मेरो एकजनाको टाढाको आफन्तको जत्ति पनि पुग्दैन । नेपाल आएर हिरो बन्छस् तँ रु राजनीतिक पहुँच थाहा छ तलाइँ मेरो रु दुई दिनमा तँलाई गायब गरिदिन्छु नेपालबाट, कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । तेरो इन्डियन एम्बेसीलाई गएर सोध् । मैले मान्छे चिनेको छैन भन्ठान्या छस् तँ माँ ले रु पैसा छ मसँग, जति भन्यो त्यति फाल्दिन्छु । तँसँग छ कति फाल्न सक्छस् ल, निकाल् माँ।
अझ जान्ने भएर फोन उठाउँदैनस् म अहिले काठमाडौंमा छैन । भीम गुरुङलाई चिन्छस् तेरो एरियाको डन हो । मेरो पैसामा बिक्छ । मेरो पैसामा पल्ने केटा हो । पत्ता लगा, झम्सिखेल एरियामा भीम गुरुङ को हो भनेर । त्यसलाई भन्, मलाई एउटा मान्छेले मेरो पैसामा पालिने मान्छे हो भन्यो, त्यो को हो भनेर सोध् । त्यो बेलामा तेल्ले कि त मारेर पठाउँछ, तर म को हो बताउँदैन । अथवा, तँ मलाई भेट्न आउँछस् । त्यसपछि तेस्लाई तेरो घरमा पठाउनसक्छु । तँ माँ८८८ र८८ले केही गर्न सक्दैनस् । के गर्छस् रु पुलिसकहाँ जान्छस् रु ५० लाख दिइदिन्छु म । छ तँसँग पैसा पुलिसलाई दिन रु उत्तम कार्की बिक्छ माँ८८८, हनुमानढोकाको एसएसपी । १५ चोटि पैसा खाइसकेको छ मसँग । आइ क्यान डु एनिथिङ ’ साहनाले भनेकी छन्, फ८ यु, एस होल ।’
घटनाको अन्तर्य यस्तो छ– सन् २०११ को मिस नेपालमा भाग लिएर फस्र्ट रनरअपको उपाधी हासिल गरेकी र शेर्पा केटा छाडेकी साहना बज्राचार्य तथा कान्तिपुर एफएमबाट सञ्चार यात्रा सुरु गरेका सुरज गिरीबीच पछिल्लो समयमा प्रेम सम्बन्ध थियो । साहना कान्तिपुर टेलिभिजनमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको उत्पादन, निर्देशन र प्रस्तुतिमा क्रियाशील थिइन् । चितवन घटनापछि दुवै कान्तिपुरबाट निकालिए । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले तयार पार्न लागेको टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि अनुबन्ध भए । यसैबीच उनीहरू अर्को तनावमा परे । त्यो हो, साहनाले मिस नेपालमा भाग लिएका बेलादेखि परिचित विज्ञापन उत्पादक तथा व्यावसायिक प्रबद्र्धक हर्षबर्धन साहनी र सुरजबीचको भनाभन । हर्षबर्धन भारतीय नागरिक हुन् । पहिला चौधरी ग्रुपका लागि काम गर्न काठमाडौं आएका हुन् । पछि जावलाखेलमा आफ्नै एजेन्सी खोलेर विज्ञापन उत्पादन तथा व्यावसायिक प्रबद्र्धनको काम थाले । त्यसक्रममा उनले साहनाले भाग लिएको मिस नेपालको प्रबद्र्धनका क्रममा भिडियो एड पनि बनाएका थिए । त्यहीँबाट हो, उनीहरूबीचको सम्बन्ध टंककिससम्म विकास भएको ।
नेपालमा सुन्दरीको ताज पहिरिएर जुन नाम कमाइन्छ, त्यो नामलाई धान्ने आम्दानी छैन । उनीहरू अक्सर सञ्चार, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा क्रियाशील हुन्छन् । मोडलिङमा निर्भर हुनेको स्थिति त झन् दयनीय छ । देशमा व्यावसायिक उत्पादनको स्थिति नाजुक छ । विज्ञापन र प्रबद्र्धनमूलक विषयमा काम गरेबापत रकम आम्दानी हुने पेशा हो, मोडलिङ । आम्दानीको बैधानिक स्रोत नै खस्किएको अवस्थामा कम्तिमा स्कुटी चढ्नुपर्ने, राम्रो लगाउनुपर्ने, राम्रो ठाउँमा खानुपर्ने जस्ता आवश्यकता पूरा गर्न हर्षबर्धनहरूले नै हो, सघाउने । केही दिएबापत केही पाउनु व्यावासयिक धर्मभित्रै पर्ने कुरा भयो । तर, थाहा छैन, यसमा मानिसका आवश्यकता पूरा गरिदिएबापत ऊबाट के–के पाउनुपर्छ रु यस्तै–यस्तै अन्तरकथाभित्रको हो, साहना र हर्षबर्धनबीचको सम्बन्ध ।
कतिपय विज्ञापन एजेन्सीका मालिकले टेलिभिजनमा कार्यक्रम र सिरियल प्रायोजन पनि गरिदिने, त्यसका कलाकारलाई घरजग्गा जोडिदिने, हाउजिङमा फ्ल्याट खरिद गरिदिने वा बसिरहेको डेराको भाडा तिरिदिने, दालचामलदेखि लुगाफाटोसम्म व्यहोरिदिने र त्यसबापत आफ्ना स्वार्थ सट्टामा लिने चलनै छ । जानकारहरूका अनुसार, सुरजसँग प्रेम सम्बन्ध शुरु भएपछि पनि हर्षबर्धन–साहनाबीच सम्पर्क र संवाद जारी रह्यो, जुन कुरा सुरजलाई निको लागेन । सुरज नेपालका प्रख्यात समाचारवाचक स्व। प्रवीण गिरीका भान्जा हुन् । राम्रो पढेका सुरज साहनासँगको प्रेममा परेपछि फरक व्यवहारमा देखिने गरेको हितैषीहरू बताउँछन् । प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको वास्तविकता केमात्रै हो भने, साहनालाई खुशी पार्नका लागि मात्र सुरजले हर्षबर्धनलाई थर्काएका हुन् । साँच्चै नै उनकी छोरी बलात्कार गर्ने, स्वयं उनलाई पिट्ने–मार्नेजस्ता नियत प्रमाणित नभएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरू बताउँछन् ।
सुरजले यसअघि पनि ज्योति ग्रुपका मानिसलाई थर्काएको प्रहरीहरू बताउँछन् । पहिला कारवाहीबाट जोगिनका लागि साहनाले अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्लसँग परामर्श लिएकी थिइन् । आफूलाई कसैले हतोत्साहित गरिरहेको र प्रहरीमा उजुरी गरेको कुरा सुनाएकी थिइन् । यसबेलासम्म सपना घटनाबारे पूरा जानकार थिइनन् । देशबाहिर थिइन् । सपनाले सल्लाह दिइन्, प्रहरीलाई आफ्नो वास्तविकता बताउने । तर, निर्दोष भए पो निर्दोषिता प्रमाणित होस् ।
साहना र सुरजले जहिले पनि हर्षबर्धनलाई फोन गरेर हिमालय, सोल्टी र हायात जस्ताहोटल र दरबारमार्गमा बोलाउने, हर्ष पुग्ने र साहनाको जोडी नपुग्ने घटना भयो । अनि, एसएमएसबाट धम्कीयुक्त सन्देश जाने जस्ता कुराले हर्षबर्धनको दैनिक जीवन नै प्रभावित हुने स्थिति भयो । यही अवस्थाबाट मुक्त हुन उनी सप्रमाण प्रहरीमा गएका थिए । – जनआस्था साप्ताहिकबाट
‘तैँले चिन्या छस्, माँ*** ? म के गर्न सक्छु तँलाई ? तेरो छोरी ? तँ माँ*** ५० वर्षको केटा गएर एउटा २५ वर्षको केटीलाई चार्ज गर्न सक्छस् भने म २२ वर्षको केटाले १५ वर्षको केटीलाई गर्न सक्दिनँ होला ? तेरै अगाडि ठोकुम तेल्लाई ?’
सुरजले भनेका छन्, ‘मेरो घरमा सात वटा कार छ । तँसँग के छ ? त्यही जवान छोरी हैन ?’
योभन्दा पनि बढ्ता बोलेका छन्, ‘तेरो पूरा शाखा सन्तानको सम्पत्ति बेच्यो भने मेरो एकजनाको टाढाको आफन्तको जत्ति पनि पुग्दैन । नेपाल आएर हिरो बन्छस् तँ ? राजनीतिक पहुँच थाहा छ तलाइँ मेरो ? दुई दिनमा तँलाई गायब गरिदिन्छु नेपालबाट, कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । तेरो इन्डियन एम्बेसीलाई गएर सोध् । मैले मान्छे चिनेको छैन भन्ठान्या छस् तँ माँ***ले ? पैसा छ मसँग, जति भन्यो त्यति फाल्दिन्छु । तँसँग छ ? कति फाल्न सक्छस् ? ल, निकाल् माँ*** ।
अझ जान्ने भएर फोन उठाउँदैनस् ? म अहिले काठमाडौंमा छैन । भीम गुरुङलाई चिन्छस् ? तेरो एरियाको डन हो । मेरो पैसामा बिक्छ । मेरो पैसामा पल्ने केटा हो । पत्ता लगा, झम्सिखेल एरियामा भीम गुरुङ को हो भनेर । त्यसलाई भन्, मलाई एउटा मान्छेले मेरो पैसामा पालिने मान्छे हो भन्यो, त्यो को हो भनेर सोध् । त्यो बेलामा तेल्ले कि त मारेर पठाउँछ, तर म को हो बताउँदैन । अथवा, तँ मलाई भेट्न आउँछस् । त्यसपछि तेस्लाई तेरो घरमा पठाउनसक्छु । तँ माँ*** र**ले केही गर्न सक्दैनस् । के गर्छस् ? पुलिसकहाँ जान्छस् ? ५० लाख दिइदिन्छु म । छ तँसँग पैसा पुलिसलाई दिन ? उत्तम कार्की बिक्छ माँ***, हनुमानढोकाको एसएसपी । १५ चोटि पैसा खाइसकेको छ मसँग । आइ क्यान डु एनिथिङ ’ साहनाले भनेकी छन्, फ* यु, एस होल ।’
नेपालमा सुन्दरीको ताज पहिरिएर जुन नाम कमाइन्छ, त्यो नामलाई धान्ने आम्दानी छैन । उनीहरू अक्सर सञ्चार, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा क्रियाशील हुन्छन् । मोडलिङमा निर्भर हुनेको स्थिति त झन् दयनीय छ । देशमा व्यावसायिक उत्पादनको स्थिति नाजुक छ । विज्ञापन र प्रबद्र्धनमूलक विषयमा काम गरेबापत रकम आम्दानी हुने पेशा हो, मोडलिङ । आम्दानीको बैधानिक स्रोत नै खस्किएको अवस्थामा कम्तिमा स्कुटी चढ्नुपर्ने, राम्रो लगाउनुपर्ने, राम्रो ठाउँमा खानुपर्ने जस्ता आवश्यकता पूरा गर्न हर्षबर्धनहरूले नै हो, सघाउने । केही दिएबापत केही पाउनु व्यावासयिक धर्मभित्रै पर्ने कुरा भयो । तर, थाहा छैन, यसमा मानिसका आवश्यकता पूरा गरिदिएबापत ऊबाट के–के पाउनुपर्छ ? यस्तै–यस्तै अन्तरकथाभित्रको हो, साहना र हर्षबर्धनबीचको सम्बन्ध ।
कतिपय विज्ञापन एजेन्सीका मालिकले टेलिभिजनमा कार्यक्रम र सिरियल प्रायोजन पनि गरिदिने, त्यसका कलाकारलाई घरजग्गा जोडिदिने, हाउजिङमा फ्ल्याट खरिद गरिदिने वा बसिरहेको डेराको भाडा तिरिदिने, दालचामलदेखि लुगाफाटोसम्म व्यहोरिदिने र त्यसबापत आफ्ना स्वार्थ सट्टामा लिने चलनै छ । जानकारहरूका अनुसार, सुरजसँग प्रेम सम्बन्ध शुरु भएपछि पनि हर्षबर्धन–साहनाबीच सम्पर्क र संवाद जारी रह्यो, जुन कुरा सुरजलाई निको लागेन । सुरज नेपालका प्रख्यात समाचारवाचक स्व. प्रवीण गिरीका भान्जा हुन् । राम्रो पढेका सुरज साहनासँगको प्रेममा परेपछि फरक व्यवहारमा देखिने गरेको हितैषीहरू बताउँछन् । प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको वास्तविकता केमात्रै हो भने, साहनालाई खुशी पार्नका लागि मात्र सुरजले हर्षबर्धनलाई थर्काएका हुन् । साँच्चै नै उनकी छोरी बलात्कार गर्ने, स्वयं उनलाई पिट्ने–मार्नेजस्ता नियत प्रमाणित नभएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरू बताउँछन् ।
- See more at: http://www.nepalese.org/article/2015/02/04/3773/#sthash.QENSFIDF.dpuf